Macluumaadka Shirkadda - Hebei Mujiang Import Oo Dhoofinta Ganacsiga Co., Ltd.
Hebei Mujiang soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Co., Ltd., oo lagu aasaasay 2019, wuxuu ku yaalaa qolka 2003, No.8 Ruicheng dhismaha xafiiska caalamiga ah, Degmada Chang'an, magaalada Shijiazhuang. Baaxadda ganacsigeedu wuxuu daboolayaa is-adeegsiga iyo wakaaladda soo dejinta iyo dhoofinta alaabada guryaha loo habeeyay, albaabbada alwaaxa loo habeeyay, albaabbada aluminiumka iyo daaqadaha, qalabka, mesh siligga iyo sanduuqyada muraayadaha, oo leh miisaan soo dejin iyo dhoofis sanadle ah oo ah 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah
Inta badan loo dhoofiyo Yurub iyo Mareykanka iyo dalal kale, waxay xiriir ganacsi oo muddo dheer soconaya iyo xiriir ganacsi la yeelatay Koonfur-bari Aasiya, Yurub iyo dalal kale, waxay ogaatay baaxadda dhaqaalaha dhoofinta ee suuqa, shabakadda iibka iyo saldhig wax soo saar, oo si xoog leh u taageera ganacsiga dhoofinta iyo horumarinta dhaqaalaha ku wajahan dhoofinta ee gobolkeenna.
Tayada marka hore, macaamiisha ugu sareysa, adeeggu waa heerka koowaad.
Waxaan haynaa kooxdeena gaarka ah ee bixisa adeegga ugu fiican, Xubnaha kooxdayada waxay ka kooban yihiin hibooyin kala duwan. Waxaan ku siin karnaa dhammaan noocyada adeegyada tixgelinta macaamiisha leh luqado kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay shaqaale hagitaan xirfadle ah ka dib iibka. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan badeecadaha, waanu wada xiriiri karnaa midba midka kale caqabado la'aan wakhti kasta, si aan u xallino dhibaatooyinkaaga kala duwan.
Badeecad kasta oo aan iibinno, waxaan leenahay xakameyn tayo leh oo adag, waxaan yeelan doonnaa shaqaale gaar ah oo kormeeraya habka wax soo saarka iyo habka rarka si loo hubiyo in badeecadeenu ay gacmahaaga si nabad ah ku gaari karaan. sidii loo hubin lahaa inaysan wax dhibaato ah dhicin ka hor inta aysan alaabtu ka bixin warshadda.